တောရိုင်း Toro တောရိုင်း Toro
ဒါဟာဆတ် powered စတူဒီယို slot ကကျွန်တော်တို့ရဲ့လောင်းကစားရုံမှာအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး slot တို့တွင်. ဒါဟာ Bull-fighting.The အားကစားတစ်ခုရုပ်ဆိုးဆောင်ပုဒ်အပေါ်အခြေခံပြီးသည် matador အဖြစ်လူသိများနေတဲ့အထီးတိုက်-ပယ်ရှိရာတစ်ဦးအမှန်တကယ်နွားကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်ရေပန်းစားသည်. အဆိုပါ developer များစိတ်ကူးကိုကျော်သူတို့ရဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ဦးထုပ်ကိုကျော်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီးဒီ slot ကအတူတက်လာကြပြီ. သူတို့ကစားသမားနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောအားကစားကြိုက်တယ်ဖြစ်စေမအများအပြားနှလုံးသားများကိုအောင်မြင်စွာအနိုင်ရပြီယုံမှားစရာမရှိ.
တောရိုင်း Toro slot နှစ်ခု၏ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူအကြောင်း
ဆတ်စတူဒီယိုအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းထဲသို့ဝင် 2012 နှင့်ဂိမ်းကစားခြင်း software ကိုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှအတော်လေးအသစ်ဖြစ်၏. ဤသည် slot က Bloopers နှင့်အတူဤ developer များကဖွံ့ဖြိုးပြီးအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး slot တို့တွင်, DJ သမားတောရိုင်းနှင့် Taco ညီအစ်ကိုများ. တစ်ဦးကအများကြီးပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဂိမ်းဤ developer ကတီထွင်ခံရဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်.
ဒီဂိမ်းကိုကျော်ကုန်ပြီ5ရက်ကြောင့်မှားယွင်း. အဆိုပါရိုင်းသင်္ကေတအဝါရောင်စာလုံးအတွက်အင်္ဂလိပ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ Toro ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါကြဲဖြန့်အနည်းငယ်ကိုနှုတ်ခမ်းမွေးနှင့်အတူအမျက် ထွက်. matador သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာသာ 2nd ပေါ်, 3ကြိမ်မြောက်နှင့် 4th reel. အဆိုပါဆုကြေးငွေသင်္ကေတကိုသာ 5th reel ပေါ်သော Bull Toro ဖြစ်ပါသည်. ပုံမှန်သင်္ကေတရွှေဒင်္ဂါးပြားများမှာ, ငွေနှင့်ကြေးဝါနှင့်တစ်ဦးတပ်များလိမ္မော်ရောင်နှင့်အနီရောင်နှင်းဆီနှင့်အတူကြီးမားတဲ့မရနိုင်ပါဘူးပန်ကာ. အဆိုပါ Bull Toro ဂိမ်း၏ Walking ရိုင်းအဖြစ်ကဘယ်ဘက်ကိုအလျားလိုက်လှုံ့ဆျောအဖြစ်ပြုမူ, ကရိုင်း symbols.The ရိုင်းသင်္ကေတမှ matador အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေသည့် Matador ကြဲဖြန့်သို့မဟုတ်ဆုကြေးငွေ Bull Toro သင်္ကေတအစားမထိုးနိုင်လှည့်.
ကမ်းတက်3matador အတွက်ကြဲဖြန့်အားဖြင့်သင်တို့အဘို့အ Matador Respin စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်3အခမဲ့ပြန်လည်လှည့်ခြင်းများ. ထို့ပြင်အရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားစေပတ်လည်-spins ပြန်လည်စဉ်အတွင်း reels ပေါ်တွင်ပေါ်လာသည့်အခါ, နောက်ထပ်ပြန်လည်လှည့်ခြင်းများစုပြုံ. ရိုင်းသင်္ကေတဟာ reels ပေါ်သောအခါပတ်ပတ်လည်အဆုံးသတ်.
အဆိုပါဂိမ်းနှင့်ကာတွန်းသက်ရောက်မှုမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်နှင့်အတူဤ slot ကအကောင်းဆုံး slot ရာ၌ခန့်ထားပြီ. အဆိုပါ slot ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်လမ်းလျှောက်လွင်ပြင်အင်္ဂါရပ်များအထူးသဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကစားသမားများအနေဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းနေသည်. ထိုအခါအခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးသင်တို့အဘို့ဆုကြေးငွေစုဆောင်းသည့်တိုးပွားစေသင်တန်းရှိပါတယ်. တွင်ခြင်းနှင့်အပေါ်ရိုင်း Toro ဆတ်စတူဒီယိုကဆွဲဆောင်မှု and Play အကျိုးတူစေသည်များနှင့်မှန်ကန်စွာအဘယ်သူမျှမအပ်ငွေလိုအပ်ပါသည်နှင့်အတူအကောင်းဆုံး slot ဖြစ်ပါသည်.